mainNews Archives - Page 387 of 421 - सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
अखिल नेपाल जनसाँस्कृतिक महासंघको काभ्रे जिल्ला समिति गठन
काभ्रे । अखिल नेपाल जनसाँस्कृतिक महासंघको काभ्रे जिल्ला समिति गठन भएको छ । काभ्रेको बनेपामा भएको महासंघको भेलाले २१ सदस्यीय काभे्र जिल्ला समिति गठन गरेको हो । तीन जना पछि थप्ने गरी प्रतिक लामाको नेतृत्वमा १९ सदस्यीय समिति बनेको छ । अखिल नेपाल जनसाँस्कृतिक महासंघ र प्रगतिशील साँस्कृतिक समाजको संयुक्त जिल्ला भेलाले दुबै संगठनलाई एकीकृत […]
माओवादी केन्द्रका नेता भक्तिप्रसाद पाण्डेको निधन
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं सांसद भक्तिप्रसाद पाण्डेको ६२ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । एकवर्षदेखि क्यान्सर रोगबाट पीडित पाण्डेको नेपाल क्यान्सर अस्पताल हरिसिद्धी ललितपुरमा उपचारका क्रममा सोमबार विहान निधन भएको हो । पाण्डेको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि मंगलबार विहान ९ देखि ११ बजेसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा राखिने सो पार्टीले […]
संघीय गठवन्धनले दाहाललाई दियो १५ दिने म्याद
काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठवन्धनले आफ्नो सहमतिमा मात्रै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई थप १५ दिनको समय दिएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा पुगेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको गठवन्धनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई स्मरणपत्र बुझाएको हो । स्मरण पत्र बुझाउँदै यादवले कात्तिक मसान्त भनेको ठाउँमा १५ दिन थप समय लिएर भएपनि आफूहरुको सहमतिमा मात्र […]
रौतहटमा डाँका र प्रहरीबीच भिडन्त, एकको मृत्यु
काठमाडौं । रौतहटको देवाहीमा डाँका समूह र प्रहरीबीच भएको भिडन्तमा १ जनाको मृत्यु भएको छ । गाँउमा हतियारधारी समूह पसेको सूचना पाएपछि अञ्चल प्रहरी कार्यालय हेटौंडा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको संयुक्त टोली र डाँका समूहबीच देवाही ८ मा भिडन्त भएको हो । प्रहरीलाई देखेपछि चार जनाको समूहमा रहेको डाँका समूहले गोली चलाएको थियो । […]
सुजातालाई उपचारका लागि ५० लाख सहयोग गर्ने सरकारको निर्णय, स्वास्थ्यमन्त्री गगन रुष्ट
काठमाडौं । सरकारले नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाको स्वास्थ्य उपचारका लागि एकमुष्ठ ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपषिद्को आइतबार बसेको बैठकले राज्यको ढुकुटीबाट ५० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको हो । काठमाडौंको मण्डिखाटारमा विशाल बंगला रहेको कोइरालाको अकुत सम्पत्ति छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका नेताले कोइरालालाई एक करोड रुपैयाँ […]
Posted in: mainNews, News, Politics
ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्न नपाउने यस्तो भविष्यवाणी
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपतिको भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भए । धेरैका अनुमानलाई गलत सावित गर्दै उनी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उनको कार्यकाल र कार्ययोजनाका विषयमा विभिन्न अड्कलबाजीहरु भइरहेका छन् । यसैमध्ये एक प्राध्यापकले भने डोनाल्ड ट्रम्प नै अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्ने बताएका थिए । उनको पहिलो भविष्यवाणी मिलेपछि अब उनले गरेको दोस्रो […]
बन्द गराउने क्रममा विप्लव माओवादीका ५० बढी नेता कार्यकर्ता पक्राउ
काठमाडौं । मुल्यवृद्धि नियन्त्रणसहित विभिन्न माग राखेर नेपाल बन्द गराउँदै हिँडेका विप्लव माओवादीका ५० भन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा विप्लव माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य ओमप्रकाश पुन समेत रहेका छन् । उनालाई प्रहरीले रत्नपार्कबाट पक्राउ गरेको हो । यसैगरी कोटेश्वरबाट राष्ट्रिय युवा जनस्वयमसेवक ब्यूरोका अध्यक्ष झकबहादुर मल्लसहित ७ जना र कलंकीबाट […]
हिलारीको गोप्य वार्ता सार्वजनिक, हिलारीको हारका पछि को जिम्मेवार ?
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा हारका लागि डेमोक्रटिक पार्टीकी उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनले अमेरिकी संघीय जाँच एजेन्सी एफबीआईका निर्देशक जिम्मेवार ठहर गरेकी छन् । चुनाव अघि एफबीआईका निर्देशक जेम्स कूमीले आफ्नो इमेलको जाँच गर्ने बताउँदा चुनाव प्रचार अभियानमा गम्भीर धक्का लागेको हिलारीले बताइन् । डेमोक्रेटिक पार्टीकी उम्मेदवार हिलारीले पार्टीका सबैभन्दा धेरै दान दिनेसँग फोनमा गरेकी थिइन् […]
वित्तीय साक्षरता अभियानमा सहभागी हुन आग्रह
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरन्जीवी नेपालले वित्तीय साक्षरता बढाउने खालका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आह्वान गरेका छन् । भैरहवास्थित नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा गभर्नर डा. नेपालले वित्तीय साक्षरता बढाउने काममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका गहन हुने भन्दै त्यसमा लाग्न आह्वान गरेका हुन् । उनले भने, […]
Posted in: Artha Jagat, mainNews
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको कोचिला राज्य समिति गठन
सुनसरी । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको कोचिला राज्य समितिको प्रथम भेलाबाट मनोज श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ३५ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । समितिको सदस्यहरुमा होम चन्द्र घिमिरे, पशुपति आचार्य, शान्तिराम गिरी, तिलक मगर, गोविन्द रिजाल, गौरव राई, सुमित्रा चौधरी, जसोदा राई, चेतराज राजवंशी, टिका पाठक रहेका छन् । यस्तै उमानाथ ढकाल, पदम तामाङ, योगेन्द्र राजवंशी, तेज लकान्द्री, […]